China Digital Grease Melting Point Tester ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > Grease အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည်
TheDigipol-MY90Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည် can quickly and accurately determine the melting point of various greases. Three samples can be measured at the same time. Through the digital optical sensor, the entire experimental process is digitized and transmitted to the computer. The intelligent software can automatically determine the melting point of the fat, eliminate the subjective error of artificially judging the melting point, and reduce the labor intensity of the experimenter. The instrument comes withaheating system to ensureastable heating rate. The platinum temperature sensor has fast response speed and high accuracy, which has incomparable advantages over the traditional method of using mercury thermometer.
1. Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည် Introduction
*၁: အအေးခန်းစနစ်ဖြင့်တစ်ကြိမ်လျှင်နမူနာ ၃ ခုကိုလုပ်ဆောင်သည်။
*၂: လူသား၏အမှားကိုထိရောက်စွာရှောင်ရှားခြင်း၊ သော့ချက်အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊
*5: ၎င်းသည်အဆီနှင့်အဆီများအရည်ပျော်ခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ISO နည်းလမ်းများနှင့်အပြည့်အ ၀ လိုက်နာသည်။
2. Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည် Parameter
(RT-30) -100â„ ƒ
0.1â„ ƒ-10â„ ƒ/မိနစ်
±0.2â„ ƒ (~ 100â„ ƒ);
အရည်ပျော်မှတ်ထပ်ရနိုင်သော0.1â„ ƒ/Min ±0.1â„ ƒတွင်
၃ ပိုင်း/အသုတ် (နမူနာသုံးမျိုးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်နိုင်သည်)
အပြင်ဘက်အချင်း ၁.၄ မီလီမီတာ၊ အတွင်းအချင်း ၁.၀ မီလီမီတာ၊ အရှည် ၁၀၀ မီလီမီတာ (တစ်ခုတည်းနှင့်နှစ်ထပ်အပေါက်)
အပြင်ဘက်အချင်းသည် ၄.၀ မီလီမီတာ၊ အတွင်းအချင်း ၃.၈ မီလီမီတာနှင့်အရှည် ၈၀၀ မီလီမီတာ (ကြီးမားသောသွေးကြောမျှင်ပြွန်)
*ဗီဒီယို function ကို:
3. Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည် Feature
The Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည် has an important position in the chemical industry and medical research. It is an instrument for the production of food, drugs, spices, dyes and other organic crystal substances.
5. Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည် Details
ပလက်တီနမ်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ၊ ထူးခြားသောရေရေချိုးအပူဒီဇိုင်း၊ အပူနှုန်း ၀.၁ မှ ၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်/မိနစ်ကိုလက်ခံပါ။ အပူချိန်ပြသအကွာအဝေးသည် ၀ ~ ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှုသည် ၀.၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ တုံ့ပြန်မှုမြန်သည်၊ တိကျမှုမြင့်မားပြီးပိုမိုတိကျသောစမ်းသပ်ရလဒ်များကိုရနိုင်သည်။
စတင်ပြီးနောက်အပူချိန်သည်အသုံးပြုသူမှကန ဦး အပူချိန်သို့အလိုအလျောက်ကြိုလိမ့်မည်။
စမ်းသပ်ရလဒ်များကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ပေးပြီးစမ်းသပ်အစီရင်ခံစာများတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီးမည်သည့်အချိန်မဆိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်ပြီး SD ကဒ်တွင်သိမ်းသည်။ SD ကဒ်နေရာမလုံလောက်လျှင်အသုံးပြုသူအားဒေတာလွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းရန်သတိပေးခံရလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူများသည်ဆော့ဝဲရှိပြတင်းပေါက်မှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ ဗွီဒီယိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေအချိန်မရွေးစမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်နိုင်ပြီးစမ်းသပ်မှုအသေးစိတ်ကိုပိုကောင်းအောင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ software interface သည်ဖော်ရွေသည်၊ ရိုးရှင်းပြီးသုံးရလွယ်ကူသည်၊ အမျိုးမျိုးသော parameters များသည်တစ်ချက်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။
The Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည် has its own heating system, which can ensureastable heating rate. The platinum temperature sensor has the advantages of fast response and high accuracy compared with the traditional method of using mercury thermometer.
မေး။ ။How many years have your company made Digital Grease Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည်?
hot Tags:: Digital Grease Melting Point Tester၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE
E-mail ကို: [email protected]m